Bernd Leno ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
ပင်မစာမျက်နှာ ဥရောပဘောလုံးပြိုင်ပွဲ ဂျာမန်ဘောလုံးကစားသမားများ Bernd Leno ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
LB အကောင်းဆုံးအမည်ပြောင်အားဖြင့်လူသိများသူတစ်ဦးဘောလုံးပြိုင်ပွဲ Genius ၏အပြည့်အဝပုံပြင်တင်ဆက် "ပြစ်ဒဏ် Killer"။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Bernd Leno ကလေးဘဝပုံပြင်ပေါင်းမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့သူ့ရဲ့ကလေးဘဝအချိန်ကနေယနေ့အထိသည်သင်မှတ်သားလောက်ဖြစ်ရပ်များတစ်ဦးအပြည့်အဝအကောင့်ဆောင်ခဲ့ရမည်။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသည်သူ၏အစောပိုင်းဘဝ, မိသားစုနောက်ခံစောစောအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအသက်, ကျော်ကြားမှုမှလမ်း, ကျော်ကြားမှုပုံပြင်, ကြားဆက်ဆံရေးနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဝမှမြင့်တက်ပါဝငျသညျ။
ဟုတ်ပါတယ်, လူတိုင်းကိုသူကကမ်ဘာပျေါမှာအတောက်ပဂိုးသမားတို့တွင်သိတယ်။ သို့သျောလညျးကိုသာအနည်းငယ်အတော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်သော Bernd Leno ရဲ့အတ္ထုပ္ပတ္တိစဉ်းစားပါ။ အခုဆိုရင်နောက်ထပ် ado ခြင်းမရှိဘဲ, ရဲ့ Begin ကြကုန်အံ့။
Bernd Leno ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts- အစောပိုင်းဘဝ & မိသားစုနောက်ခံ
Bernd Leno သူ့မိဘဖို့4မတ်လ 1992 ရက်နေ့တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်; သူ့အမိကား, Rosa Leno နှင့်ဖခင်ဗစ်တာ Leno အတွက် Bietigheim-Bissingen, ဂျာမနီ။ Bernd Leno ရဲ့မိသားစုဂျာမန်ရုရှဇာစ်မြစ်၏ထက်ဝက်ဂျာမန်သူလည်းမိမိအဖေတစ်ဝက်ရုရှားကိုကျေးဇူးတင်သည်။
Leno စတုဂတ်နဲ့ရငျးနှီးတဲ့နီးကပ်သည့်တောင်ဘက်ဂျာမနီမှာ Bietigheim-Bissingen ၏သေးငယ်တဲ့မြို့၌သူ၏အစ်ကိုနှင့်အတူကြီးပြင်းလာတယ်။ ကလေးတစ်ဦးကိုတစ်ဦးအလွန်လုံ့လရှိသူကောင်လေးအဖြစ်သူ့ကိုမြင်အဖြစ် Leno သိတယ်သူများသည်။ ထိုကဲ့သို့သောစွမ်းအင်အားကစားသို့သည့်ခဲ့ကြသည်။ အားကစား၏ပြော Bernd Leno တို့မိသားစုအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှအဖွဲ့ဝင်ဘောလုံးကိုချစ်၏။ Leno တစ်ကြိမ်ပြုလုပ်ထားသကဲ့သို့၎င်း,
"ဘောလုံးငါ့ညီအဘို့နှင့်ကြောင့်ငါတို့အသက်ခဲ့ငါ့အဘို့အကြှနျုပျ၏မိသားစုများအတွက်အလွန်အရေးကြီးသောဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ကအမြဲကျွန်တော်တို့ကိုလာမယ့်ဘောလုံးကိုရှိသည်ဖို့, ဘောလုံးကစားချင်တယ်။ အဲဒီအချိန်တုန်းကတိုင်းကစားစရာဘောလုံးတယျ။ "
အစောပိုင်းအပေါ်အားလပ်ရက်ကာလအတွင်း Leno သူသူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူကြောင့်သူ့ကိုမှအရေးမလုပ်ခဲ့ရာ "မကောင်းတဲ့ကွင်း" တွင်အထူးသဖြင့်ဒေသခံဂိမ်းကစားသွားလိမ့်မယ်။6၏အသက်အရွယ်မှာသူတစ်ဦးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတက်ကောက်နေသဖြင့်အလေးအနက်ထားဘောလုံးယူရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
Bernd Leno ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts- အစောပိုင်းအလုပ်ရှာဖွေရေးဘဝ
Leno သူ့ကိုသူ၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း၏အုတ်မြစ်ချရန်အတွက်စင်မြင့်ပေးသောသည်သူ၏လူငယ်အဖွဲ့က SV Germania Bietigheim ၏တန်းစီဇယားသို့စာရင်းသွင်း။ သူဟာကလပ်ပူးပေါင်းယခုအချိန်တွင်နေကွင်းလယ်ကစားသမားလက်ျာဘက်အဖြစ်တွန်းစတင်ခဲ့သည်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖြစ်လာဖို့ Leno ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပဲသွားတာစိတ်ကူးယဉ်မဟုတ်ခဲ့ပေ။ ထိုသို့သောပြဌာန်းခွင့်ပိုကြီးအကယ်ဒမီစမ်းသပ်မှုတွေကြိုးစားဖို့သူ့ကိုဦးဆောင်ခဲ့သည်။
အသက်အရွယ် 11 မှာ Leno VfB စတုဂတ်လူငယ်အဖွဲ့က join ဖို့လျှောက်ထားခြင်းနှင့်စမ်းသပ်မှုတွေတက်ရောက်ရန်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရသည်။ သူနေသည်ဟုသူအတွက်စမ်းသပ်မှုတွေတက်ရောက်ရန်ပဏာမသူ 200 ငယ်ရွယ်ကစားသမားတွေအကြောင်းဝင်ရောက်ခဲ့သည်။
ကံကောင်းတာက, Leno သူတို့နည်းပြစည်းရုံးသိမ်းသွင်းပြီးနောက် VfB စတုဂတ်ကရွေးချယ်ခံခဲ့ရသော6ကစားသမားအကြားခဲ့ပါတယ်။ Leno နေဆဲဤအချိန်တွင်တစ်ကွင်းလယ်ကစားသမားအဖြစ်ဆက်လက်။
Bernd Leno ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts- Fame မှလမ်း
ဘယ်လိုသူတစ်ဦးဂိုးသမားဖြစ်လာခဲ့သည်: လူငယ်တစ်ဦးကွင်းလယ်လူအဖြစ်, Leno ဟာ backline ဆုံးနဲ့အမှု၌ပင်ဂိုးသမားကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ပြန်ပြေးတွေအများကြီးကိုပြု၏။ သူကသူ့ကိုတစ်ဂိုးသမားဖြစ်လာမှဦးဆောင်တစ်ခုခုမတိုင်မီ 10 နှစ်အရွယ်မှာအထိဤသူကိုပြု၏။ နှင့်အင်တာဗျူးတွင် အာဆင်နယ်အသင်း, Leno တစ်ချိန်ကအဓိက။ သူ၏စကားခုနှစ်တွင်;
ငါက 'ငါကြိုးစားကြည့်ချင်တယ်' 'သူတို့ကဆိုသည်။ ငါကြိုးစားခဲ့လူတိုင်းကျွန်မအလွန်ကောင်းသည်ကိုမြင်တော်မူ၏။ ထိုအခါငါ၏အမိဘများငါ့ကိုအချို့လက်အိတ်ဝယ်ငါပြီးနောက်ရည်မှန်းချက် post ကိုစွန့်ခွာချင်ခဲ့ပေ။ "
အဘယ်အရာကို Leno နောက်ထပ်ဂိုးသမား၏လုပ်ရပ်ပျော်မွေ့ဖန်ဆင်းသည်သူ၏ရုပ်တုကိုယခင်အာဆင်နယ်ဂိုးသမားထက်မကအခြားလူတစ်ဦး, Jens Lehmann ကိုဖြစ်ခဲ့သည်။
ကလေးငယ်များအတွက်အဖြစ်, Leno စပိန်နှင့်ယခင်ရီးရဲလ်အိုင်ကွန်မှသူ၏ဦးဆောင်ယူပေမယ့် ဂိုးသမား Iker Casillas။ ဒါဟာစတုဂတ် Leno မှာပထမဦးဆုံးသူကနေသင်ခန်းစာ goalkeeping အများကြီးယူဘယ်သူကို Jens Lehmann ကိုတွေ့ဆုံခဲ့သည်။ အကြောင်းစကားပြောသောသူသည်တစ်ချိန်ကပြောသည် အာဆင်နယ်စာနယ်ဇင်း;
ငါသည်သူ၏သင်တန်း၏ဤမျှလောက်များစွာသောသူ့ကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်ပင်ကျွန်မဟောင်း 16 သို့မဟုတ် 17 နှစ်ပေါင်းအကြောင်းကိုအခါသခင်ဘုရားနှင့်အတူအချို့သောသင်တန်းများရှိခဲ့ပါတယ်။ သူကဒါစုစည်းဒါပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါကသင်တစ်ဦးပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဂိုးသမားအဖြစ်လိုအပ်သောစိတ်ဓာတ်ပါပဲ။
ဟောင်းများအာဆင်နယ်ဂိုးသမား Leno ကလပ်နဲ့သူ့ရဲ့လူငယ်ကစားသမားဘတက်ဝိုင်းအခါ, Lehmann နေဆဲ VfB စတုဂတ်မှာရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ Leno သူတို့ရဲ့ကလပ်ရဲ့အကြီးတန်းခြမ်းမှရာထူးတိုးခံရအပေါ်သို့ Lehmann ရဲ့ဆက်ခံသူကဲ့သို့မိမိကိုမိမိမြင်တော်မူ၏။ ကံမကောင်းစွာပဲပရိသတ်တွေအဘို့, Leno ထို့နောက်မှာဂျာမန်ရဲ့တတိယဌာနခွဲမှာကစားအဖြစ်သောကလပ်နှင့်အတူနှစ်နှစ်အကြာတွင်ရေကြည်ရာမြက်နုရာကိုလက်မခံဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ Leno စွမ်းဆောင်ရည်သူ့ကို Bayer လေဗာကူဆင်နှင့်အတူဘွန်ဒစ်လီဂါလက်မှတ်ရရှိခဲ့သည်။
Bernd Leno ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts- Fame မှထလော့
ထိုအချိန်က 19 ဂျာမန်တတိယဌာနခွဲကနေလမ်းအပေါင်းတို့ကိုပထမဦးဆုံးဌာနခွဲမှသာသူ Bernd Leno များအတွက်စိန်ခေါ်မှုနှင့်တစ်ချိန်တည်းမှာစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ခဲ့သည် Moving ။ ဒါဟာကြောင့်သူ့ကလပ်လာရောက်ပူးပေါင်း၏သုံးပတ်အကြာတွင်ချယ်လ်ဆီးဆန့်ကျင်သည်သူ၏ချန်ပီယံလိဂ်ပွဲဦးထွက်ကိုဖန်ဆင်းဆိုတဲ့အချက်ကိုမှစိန်ခေါ်ခဲ့သည်။ ပွဲစဉ်အတွင်း Leno ချယ်လ်ဆီးရဲ့အကောင်းဆုံးတိုက်စစ်မှုးဆန့်ကျင်အံ့သြဖွယ်ဖျော်ဖြေပွဲပြသ, Didier ဒရော့ဘာ.
အင်တာဗျူးမှာတော့ Leno တစ်ချိန်ကပြန်ပြောပြ;
ဂိမ်းပြီးနောက်, ပတေရုသ သူကငါ့အဘို့ကျေနပ်ခြင်းနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ဟုဆိုသည်။ ထိုအမှုအရာလို့ပြောရန်မလိုအပ်ခဲ့ဘူးဒါပေမယ့်ငါတကယ်ကတန်ဖိုးထား။ ခုနစ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းကြီးနှင့်ယခုကျွန်တော်အာဆင်နယ်အသင်းမှာအတူတူဖြစ်ကြောင်း - ကအရူးပဲ!
ချန်ပီယံလိဂ်ပွဲစဉ်ပြီးနောက်ကရှင်းရှင်းလင်းလင်း Bayer လေဗာကူဆင်တစ်ဂိုးသမားတစ်ဦးသစ်ကိုသူရဲကောင်းကိုတွေ့ဖူးဖြစ်လာခဲ့သည်။ မင်းသိလား?… ဒါကချန်ပီယံလိဂ်ပွဲစဉ် Leno စဉ်ယူအီးအက်ဖ်အေချန်ပီယံလိဂ်ကစားရန်အငယ်ဆုံးများအတွက်ဥရောပဆုကိုပေးတော်မူ၏။ သူသာ 19 နှစ်နှင့် 193 ရက်နေ၏။
Jens Lehmann ကိုထွက်ခွာသွားပြီးနောက် Leno အထင်ကြီးဖျော်ဖြေပွဲတစ်ခု string ကိုအပြီးပထမဦးဆုံးအသင်းအတွက်ပုံမှန်ဖြစ်လာသည်။ သူ 2011 ပွဲအောင် 2018 ထံမှ 233 မှ Bayer လေဗာကူဆင်နှင့်အတူနေဖို့သွားလေ၏။ အမှုအရာသည်အလွန်တဦးတည်းသည်အထိသူအပေါငျးတို့နှစ်ပေါင်းကောင်းစွာသွားလေ၏ ဆိုးနေ့ !!
အဆိုပါဖိအားပေးမှုအထံတော်ရယူခြင်း: ထိုသို့ထပ် - လူတိုင်းကြီးမားတဲ့ရဲစွမ်းသတ္တိရှိသည်ဖို့ Leno သိတယ်။ ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမျှမကသူရာသီ၏အဆိုးဆုံးဘွန်ဒစ်လီဂါဂိုးသမားအမှားလုပ်သည့်အခါအောက်တိုဘာလ 2015 စဉ်အတွင်းဤသည်အလွန်ဆိုးရွားနေ့၌အထံတော်သို့ဖြစ်ပျက်သိတယ်။ တစ်ဦးဘွန်ဒစ်လီဂါဂိမ်းထဲမှာအတူ Augsburg, Leno ကနေသွားတော်ပြန်မယ့်အန္တရာယ်-ရှာဖွေနေလှီးဖို့အကူအညီမ ယောနသန်သည် Tah သူ့ကိုယ်ပိုင်အသားတင်၏နောက်ကျောသို့။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဗီဒီယိုအား Watch;
ပရိတ်သတ်တွေရဲ့စကားကတိုက်ခိုက်ခဲ့ခံရပြီးနောက်ဟုန်းဟုန်းစကားပြောသော, Leno ကလည်း,
"တစ်ဂိုးသမားအဖြစ်, သင်တစ်ဦးအနေဖြင့် တည်းသောတိုက်လေယာဉ်။ သင်သီးခြားစီတက်နွေး, သီးခြားစီလေ့ကျင့်။ သင်ရုံတစျခုအစက်အပြောက်အဘို့စစ်တိုက်ခြင်းနှင့်သင်ရုံတစျခုကြီးမားသောအမှားလုပ်လျှင်, သင်အလျင်အမြန်လူထုံပါပဲ။ "
ဤအချိန်တွင်သူ၏ချစ်ရာသခင်သည်ဂျာမန်ကလပ်နှင့်အတူ Leno ရဲ့နောက်ဆုံးနေ့ရက်ကိုလာမယ်ဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ သူလုပ်ခဲ့တယ်အားလုံးစွန့်ခွာရန်အခွင့်အလမ်းများအတွက်စောင့်ဆိုင်းဖို့ပဲ။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, ဇွန်လ, 19 ၏ 2018th, အင်္ဂလိပ်ကလပ်ပေါ် လက်နက်တိုက် မိမိအဝန်ဆောင်မှုများကိုရရှိခဲ့သည်။ ဤသည် Leno သည်သူ၏မိတ်ဆွေဟောင်း Petr ကရရှိသွားတွေ့ဆုံရန်အခွင့်အလမ်းကိုပေးတော်မူ၏။
ကြမ္မာကရှိသည်မယ်လို့အမျှ Leno အာဆင်နယ်အသင်းကြီးမြတ်ဂိုးသမား၏အခြားအောင်မြင်မယ်လို့သူဂိုးသမားဖြစ်လာခဲ့သည်။ ကြွင်းသောအရာ, သူတို့ပြောသကဲ့သို့, သမိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
Bernd Leno ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts- relationship ဘဝ
Bernd Leno သူတို့နှစ်ပတ်လည်နေ့ကျင်းပရက်စွဲဖြစ်ဖြစ်ပျက်သည့်သြဂုတ်လ 15 2015, နောက်ပိုင်းဆိုဖီ Christine နှင့်အတူရှိခဲ့သည်။
ဂျာမန်နှင့်ခကျြနွယ်ဖွားဖေဖော်ဝါရီလ 17 (များ၏ 1997th နေ့၌မွေးဖွားခဲ့သည်သူဆိုဖီ5 နှစ်သူမ၏လူထက်အသက်ငယ်) Dusseldorf, ဂျာမနီ၌တည်၏။ သူမလည်းအချို့အချိန်မော်ဒယ်သုံးစွဲသူတစ်ဦးစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကျောင်းသားဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်ဦးစလုံးမိတ်ဆွေတို့ကိုသူတို့ရဲ့အားလပ်ရက်ခံစားမျိုးစုံထူးခြားဆန်းပြားတည်နေရာပေါ်ပြောက်ပြီ။
Bernd Leno ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts- ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဝ
Bernd Leno ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဝကိုသိရန်ရယူခြင်းဂိုးသမားသငျသညျသူ့ကိုအကြောင်းပြည့်စုံရုပ်ပုံ get ကူညီပေးနိုင်လိမ့်မည်ဟု asides ။
ချွတ်စတင်ကာသူသည်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်တစ်ဦးရိုမန်ကက်သလစ်ဖြစ်ပါတယ်။ Leno တစ်ချိန်ကသူပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး Francis နှင့်အတူ "အထူးယခုအချိန်တွင်" ဟုချေါသောအရာကိုရှိသည်ဖို့စိန့်ပေတရု၏ Basilica, ရောမမြို့မှာရှိတဲ့ဗာတီကန်သွားရောက်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုဖန်ဆင်းတော်မူပြီ။
တစ်ဦးကရီးရဲလ်ဖီဖာဂိမ်းကစားသူ: မိမိအအာဆင်နယ်အသင်းဖော်နေစဉ် Hector Bellerin နှင့် ရော့ Holding သေနတ်သမားဂိမ်းကစားလိုရှိ၏ Duty, Bernd Leno ၏ခေါ်ဆိုမှုလိုပဲ Juan Foyth မဟုတ်ဘဲဖီဖာနှင့်အတူကပ်လိမ့်မယ်။
Casillas များအတွက် Leno ရဲ့လေးစားမှုဖီဖာဂိမ်းစီးရီးအပေါ်အသင်းကိုသူ့ရဲ့ရွေးချယ်မှုအတွက်ရောင်ပြန်ဟပ်ခဲ့ပါသည်။ အကြောင်းစကားပြောသောသူသည်တစ်ချိန်ကပြောကြားခဲ့့သည်က ...
"ငါသည်အစဉ်အမြဲ PlayStation အပေါ် Real Madrid အသင်းအဖြစ်ကစားရန်အသုံးပြု" ဟုသူကပြောသည်. "Casillas ကြောင်းများအတွက်ကြီးမားသောအကြောင်းပြချက်ဖြစ်ခဲ့သည်" ။
Bernd Leno ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts- မရေမတွက်အလုပ်ရှာဖွေရေးအချက်အလက်
ဘယ်လိုတော် Nickname- တယ် "ပြစ်ဒဏ် Killer ": ပေမဲ့ Leno ကြီး Jens Lehmann ကနေအများကြီးသင်ယူနှင့် ဂိုးသမား Iker Casillasဒါပေမယ့်သူအမှန်တကယ်အဲဒီနှစျခုဂိုးသမားတစ်ခုခုသင်ပေးနိုင်ဘူး။ ဒါကသူ့ကိုသူ၏ချစ်သူတို့အမည်ပြောင်ပေးသော "ချွေတာရေးပြစ်ဒဏ်များ" ၏လုပ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။
မင်းသိလား?… ယခင် t ကိုသူကလေဗာကူဆင် glovesman တစ်ချိန်ကကြက်ညှာကိုပြန် 2013 / 14 တစ်ဦးဘွန်ဒစ်လီဂါအစက်အပြောက်-ကန်ဘောများတွင်ရှစ်ထဲကငါးပြစ်ဒဏ်များရပ်တန့်တော့ဘူး။ သူကတကယ်တော့တစ်တန်းလေးကယ်လွှတ်တော်မူ၏။ စာအရေးအသား၏ထိုအချိန်ကအဖြစ်, (တက်ကြွစွာနှင့်အငြိမ်းစားနှစ်ဦးစလုံး) အသကျရှငျအဘယ်သူမျှမဂိုးသမားကြောင်းကမ္ဘာ့စံချိန်ရိုက်နှက်ခဲ့သည်။
တည်မြဲခြင်း: Leno အများဆုံးခေတ်သစ်နေ့ရက်ကိုဂိုးသမားနဲ့မတူပဲခံနိုင်ရည်အများကြီးရှိပါတယ်။ သူဟာတစ်ချိန်ကကျိုးနှာခေါင်းနှင့်အတူလုံခြုံပို့စ်စောင့်ရှောက်သူတို့ထံမှဘောလုံးကိုယူနိုင်ရန်လေလံ၌သူ၏ပြိုင်ဘက်ဆီသို့ဦးတည်ကိုအားသွင်းဖို့ကြောက်လန့်ဘယ်တော့မှဖြစ်ခဲ့သည်။
ဒါကဆန့်ကျင်နေတဲ့ချန်ပီယံလိဂ်နောက်ဆုံး 16 ဂိမ်းထဲမှာဖြစ်ပျက် ဒီယေဂိုရှိမောင်'' အက်သလက်တီကိုမက်ဒရစ့်။
သမ္မာကျမ်းအမှန်တရားနေစစ်ဆေးခြင်း: ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Bernd Leno ကလေးဘဝပုံပြင်ပေါင်းမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ဖတ်နေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ တွင် LifeBogger, ကျနော်တို့တိကျမှန်ကန်မှုနှင့်တရားမျှတမှုများအတွက်ကြိုးစားကြသည်။ သင်မှန်မကြည့်ဘူးသောအရာတစ်ခုခုကိုရှာဖွေပါလျှင်အောက်တွင်မှတ်ချက်ခွငျးအားဖွငျ့အကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူဝေမျှပါ။ ကျနော်တို့ကအမြဲသင့်ရဲ့အိုင်ဒီယာကိုတန်ဖိုးထားလေးစားပါလိမ့်မယ်။
ဖာဘရီဂက်စ်ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
Kieran Tierney ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
လူးကပ်စ Torreira ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်